कोठामा हिटर बालेर सुत्दा किन मृत्यु हुन्छ, कसरी जोगिने ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । मौसममा आएको परिवर्तनसँगै केही दिन यता राजधानी लगायत देशभर चिसो बढेको छ । चिसो बढेपछि देखिने विभिन्न खालको स्वास्थ्य समस्याका कारण र बालबालिकामा चोसोले पुर्‍याउने असरका कारण धेरैले त्यसबाट बच्नका लागि उपायहरु खोज्ने गर्छन् ।
त्यस्तै उपाय नै मानव जीवनको लागि कहाली लाग्दो घटना बनिरहेको छ । हिटरको गलत तरिकाको प्रयोगले नै नेपाल घुम्न आएका ८ जना भारतीय पर्यटकले अकालमा नै ज्यान गुमाउन पुगे । मकवानपुरको दामनस्थित एक रिसोर्टमा बेहोस अवस्थामा भेटिएका ८ भारतीय पर्यटकको मृत्युको कारण नै हिटर बन्न पुगेको छ ।
मकवानपुरको थाहानगरपालिका–४ को दामनस्थित एभरेष्ट पानोरमा रिसोर्टमा बेहोस अवस्थामा भेटिएर उपचारको लागि काठमाडौं ल्याइएका आठजना भारतीय पर्यटकको मृत्यु भएको घोषणा अस्पतालले गर्‍यो ।
अचेत अवस्थामा भेटिएका आठै जनालाई ह्याम्स अस्पतालमा ल्याईएको थियो । मृत्यु हुने दुई जना महिला र दुई पुरूष र चार बालबालिका रहेका छन् ।
मृत्यु हुनेमा ३८ वर्षीय रन्जित कप, ३४ की ईन्द्र, ३७ का प्रविण, ३२ की सरिया, ५ वर्षका अभी, ७ की अर्चना,५ वर्षका बैशनव र ९ की बन्द्रा छन्।
त्यसो त हिटर बाल्ने क्रममा असावधानी अपनाउँदा दुर्घटना भएको यो नै पहिलो घटना होइन । यस्ता थ्रुपै घटना सार्वजनिक भएका छन् । केहि महिना अघि मात्र किर्तिपुरमा नै आमाछोराले त्यसैगरि नै ज्यान गुमाएका थिए ।
के हिटार नै त्यस्ता खतरनाक हुनसक्छ ? वा त्यसको प्रयोगमा गरिने असवाधानी ? धेरैमा यो प्रश्न उब्जिएको हुनुपर्छ । न्यानो कपडाको प्रयोग गरेपनि आसपासको वातावरण चिसो हुने भएका कारण हिटर बाल्ने गरिन्छ ।
यसरी चिसोबाट जोगिन घरको झ्याल ढोका बन्द गरेर हावा नछिर्ने गरी हिटर ताप्दा कोठामा कार्बनडाइ अक्साइड वा कार्बन मोनोअक्साइड ग्याँस बढ्न जाने र उक्त ग्याँस धेरै समयसम्म शरीरमा प्रवेश गर्दा विभिन्न प्रकारको समस्या देखिन सक्ने वा मृत्यु नै पनि हुन सक्ने विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।
कोठामा बालिने हिटरले हामीलाई चिसोबाट बच्न सहयोग गर्छ । तर लामो समयसम्म कोठामा हिटर बालेर ताप्दा यसको प्रकासले हाम्रो आखाँलाई असर पुर्‍याउछ, यसले आखाँको ज्योती कमजोर बनाउनुका साथै आँखा सुक्खासम्म बनाउँछ ।
त्यसैले नजिकै बसेर हिटर ताप्नु हुँदैन । सकेसम्म १० सेन्टिमिटर टाटा राखेर हिटर ताप्ने गर्नुपर्छ । यदि हिटर ताप्दै हुनुहुन्छ भने इलेक्ट्रिकल हिटरभन्दा ग्यास हिटर ताप्नु स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ ।
ग्यास हिटरले इलेक्ट्रिकल हिटरभन्दा कम अक्जिनलाई असर गर्छ। यस्तै ग्यास हिटरले कार्बनमोनोअक्साइड ग्यास पनि कम फाल्ने गर्छ। जसले गर्दा लामो समयसम्म पनि ग्यास हिटर ताप्ने गर्दा पनि स्वास्थ्यलाई खासै असर गर्दैन ।
हिटरलाई वेलावेलामा बन्द गर्ने गर्नुपर्छ । र, प्रयोग नभएको समयमा झनै यसलाई सधैँ बन्द गर्न आवश्यक छ । राति सुत्नेवेला पूर्ण रूपमा हिटर बन्द गर्नुपर्छ । नजिकै बसेर हिटर ताप्नुहुँदैन । यसले छाला सुक्खा हुने, आँखामा समस्या आउने र नाकको रक्तनली फुट्नेजस्ता समस्या देखापर्छन्।
बालबालिकाको पहुँच पुग्ने ठाउँ वा बाटोमा हिटर कहिल्यै राख्नुहुँदैन मुटु, श्वासप्रश्वासजस्ता रोगका बिरामीले हिटर प्रयोग गर्नुहुँदैन । पानी, चिया, कफीजस्ता पेयपदार्थ पिउँदै हिटर ताप्नु उचित हुन्छ । यसले छाला सुक्खा हुने समस्याबाट बचाउँछ । छिट्टै आगोले टिप्ने वस्तु हिटरअगाडि राख्नुहुँदैन ।
बुद्धधर्ममा ‘मार’को अर्थ के हो ? बुद्धको यी वचनले तपाइँको जीवन बदल्न सक्छ !
असनेपालन्युज डट कम । "मार" भनेको शत्रु हो । यसलाई राक्षस वा बाधा भनेर पनि चिनिन्छ । यो आफ्नै आत्मग्राहको उपज […]